Mikarakara Fifaninanana Tantara Fohy Ho an’ny Gadra ao Polonina Ilay Britanika Mpanoratra Tantara Horohoro, Graham Masterton · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2017 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, polski, Ελληνικά, Português, Italiano, Türkçe, English
Karatra paositra 1945 mampiseho ny fonja ao Braniewo, Polonina. Sary azon'ny rehetra ampiasaina tao amin'ny Wikimedia Commons.
Nikarakara fifaninanana mikendry hampiray hina indray ireo Poloney voafonja amin'ny alalan'ny asa soratra vaovao ilay Britanika malaza, mpanoratra tantara mampihorohoro Graham Masterton. Nampiasa media sosialy i Masterton mba hanambara fa homena izay tantara fohy tsara indrindra ny loka antsoina hoe “Nosoratana tany am-ponja”:
“Tonga tamiko ny hevitra rehefa avy namangy ny fonja tsara fiarovana indrindra Wolow eo akaikin'i Wroclaw tamin'ny Oktobra tamin'ny herintaona aho. Mpamaky boky sy liana tamin'ny bokiko sy ny asa soratra rehetra avokoa ireo gadra. Raha ny marina dia iray amin'ireo mpamaky feno hafanam-po hitako hatramin'izay izy ireo.”
Nanoratra taratasy tany amin'ireo gadra tsirairay ny mpanoratra, mba handrisika azy ireo manokana hametraka malalaka ny fahaiza-mamorona sy ny eritreritr'izy ireo ary handray anjara amin'ny fifaninanana haisoratra karakarainy.
Mpanoratra, Graham Masterton (ankavia) rehefa avy nihaona tamin'ny Mpiambina ny Wolow, Robert Kuczera (ankavanana). Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny mpanoratra.
Nomena ireo voafonja rehetra miisa 71.000 ao Polonina ny fanasàna mba handray anjara amin'ny tantara fohy amin'ny Loka Graham Masterton Nosoratana tao Am-ponja
Afaka mametraka tantara fohy momba ny lohahevitra izay tiany ny voafonja (ny fe-potoana farany amin'ny fifaninanana dia ny faran'ny volana Martsa 2017). Hadika amin'ny teny anglisy ny tantara, i Masterton mihitsy no hifidy manokana izay telo tsara indrindra ary hisidina hankany Polonina amin'ny volana Jiona mba hanolotra ny loka. Ny loka dia ahitana takelaka misy soratra voasokitra, harona feno voankazo sy ny zava-mamy, ary boky avy amin'ny Trano Famoaham-boky Rebis. Raha mahomby ny fifaninanana, mikasa hanao tahaka izany ao Angletera sy Irlandy ihany koa izy.
Manana fifandraisana amin'i Polonina ity mpanoratra tantara horohoro sy heloka bevava noforonina malaza ity- nifindra monina tany Angletera tamin'ny taona 1890 ny raibeny, izay Poloney, mba tsy ho voaantso ao amin'ny Tafika Imperialy Rosiana.
Ny tantaran'i Masterton “The Manitou” (1978) no tantara horohoro Tandrefana voalohany nivoaka tao Polonina nanomboka tamin'ny Ady Lehibe faha-2. Talanjona tanteraka tamin'ny fahalianana nasehoan'ireo gadra ao amin'ny Fonja Wolow tamin'ny bokiny ny mpanoratra – sy ny faharanitan-tsaina tamin'ny fanontanian'izy ireo – ka tonga taminy ny hevitra hoe mety tsy ny tantara foronina an-tsoratra ihany no mahaliana azy ireo, fa afaka mahazo tombotsoa lehibe amin'izany izy ireo:
Manana karazana tantara tian-ko lazaina ny ankamaroan'ny olona, saingy tsy mba manana fahafahana haneho ny hevitr'izy ireo sy ny fihetseham-pon'izy ireo any ivelan'izao tontolo izao kosa ny voafonja. Tamin'ny fampidirana ny fifaninanana Graham Masterton ‘Nosoratana tany Am-ponja”, afaka mahatsapa izy ireo fa misy mihaino ivelan'ny efitr'izy ireo ao am-ponja ny tantaran'izy ireo.”
Tsy niandry ela ary nanaiky ny mpiambina ny Wolow sy ny tanàna Wrocław, hahazo fanohanana lehibe avy amin'ireo famoaham-boky Graham ao Poznan, Rebis sy ny tranombokim-bahoakan'i Wroclaw ihany koa ny fifaninanana.
Tamin'ny fomba fiteny manome aingam-panahy, nilaza i Masterton hoe:
“Afaka manoratra izay tian'izy ireo ny gadra. Na dia mihidy ao am-ponja aza, te hahita azy ireo hampiasa malalaka ny eritreritr'izy ireo aho.”
Tsara avokoa ny fanehoan-kevitra mikasika ny fifaninanana karakarain'i Masterton tao amin'ny gazety Poloney.